ပင်းတယ၊ ရွာငံမြို့နယ်များအတွင်း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု/ပြည်နယ် ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
by Thinmbadm1n / Feb 27, 2017 / comments
နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား အီတလီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား အီတလီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Pier Giorgio ALIBERTI သည် ယနေ့ညနေ (၄) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
JICA ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) စီမံကိန်းမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတဝေမျှခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရဲနိုင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရဲနိုင်သည် (၂၀-၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၂၃-၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
စစ်တွေမြို့နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေး
by Thinmbadm1n / Feb 15, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ရိက္ခာများ (ဒုတိယအကြိမ်) ထောက်ပံ့ပေးအပ်
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်
ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းအထူးသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၈) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ
by Thinmbadm1n / Feb 13, 2017 / comments
ရန်ကုန် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွင် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းအထူးသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၈) သင်တန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို (၁၃-၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ တနင်္လာနေ့၊ နံနက်(၀၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်ကျော် တက်ရောက်၍ သင်တန်းဖွင့် မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ကုလသမဂ္ဂ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ် (UNDP) လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး လာရောက်တေ
by Thinmbadm1n / Feb 10, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ကုလသမဂ္ဂ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ် (UNDP) လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Haoliang Xu သည် ယနေ့နံနက် (၁၁) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ရုံးမှ သံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ
by Thinmbadm1n / Feb 08, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Roland Kobia သည် ယနေ့နေ့လည် (၂) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲနိုင်အား SDC မှ Minister , Deputy Head of Mission and Head of Cooperation ဖြစ်သူ Ms. Carine Carey လာရောက်တွေ့ဆုံ
by Thinmbadm1n / Feb 07, 2017 / comments
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲနိုင်အား ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) မှ Minister, Deputy Head of Mission and Head of Cooperation ဖြစ်သူ Ms. Carine Carey သည် ယနေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
by Thinmbadm1n / Feb 06, 2017 / comments
နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရဲနိုင် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရဲနိုင်သည် (၂၉-၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၂-၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ တိုက်ပွဲရှောင်တိုင်းရင်းသားမိသားစုများအတွက် ရိက္ခာများ ဒုတိယအကြိမ်ထောက်ပံ့ပေးအပ်
by Thinmbadm1n / Feb 05, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ကချင်ပြည်နယ်ရှိ တိုက်ပွဲရှောင်တိုင်းရင်းသားမိသားစု များအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီ ရိက္ခာများ ဒုတိယအကြိမ်ထောက်ပံ့ ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယမန်နေ့နံနက် (၁၁) နာရီက ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဆမားဒူဝါဆင်ဝါးနော် ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။